गायिका बाबा राणा भन्छिन्– संगीतमा डुबुल्की मार्दा मन शान्त « Tuwachung.com
जमुना वर्षा शर्मा	२०७७ भाद्र २०, १०:०८
‘करोडौं मुटुहरूको एउटै ढुकढुकी नेपाल’
नवराज कार्कीका शब्दमा प्रसिद्ध गायक सरोजगोपाल बज्राचार्यले संगीत दिएको यो कर्णप्रिय गीतकी गायिका हुन्– बाबा राणा । मधुर स्वरकी धनी राणा नेपाली संगीत आकाशकी एक अब्बल साधकको नाम हो । नौ वर्षको उमेरदेखि गायनप्रतिको लगावले गीत–संगीत क्षेत्रमा पहिचान बनाउन सफल गायिका राणाले राष्ट्रभावका मात्र नभएर प्रेम र विछोडका समेत थुप्रै गीत गाएकी छन् । उनले नेपाली–संगीत क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेकी छन् ।
रचना, संगीत र लयको त्रिवेणीबाट कालजयी गीत पस्कन सफल संगीतप्रतिको पृष्ठभूमि खोज्दै जाने हो भने उनको पारिवारिक योगदानसम्मै पुग्न सकिन्छ । उनका बुवा, ठूूलो बुवा र सानो बुवाले घरमा हुने काममा रामायण पढ्दा तबला, मादल, हार्मोनियम तथा यस्तै बाजा बजाउने गर्थे । उनका कान्छो बुवा रामचन्द्रविक्रम राणा संगीत प्रशिक्षक थिए । राणा घरको यो सांगीतिक वातावरणले नै आफू पनि संगीतप्रतिको यात्रामा सानैदेखि जोडिन पुगेको अनुभव सुनाउँछिन् ।
पुष्प नेपाली, नारायणगोपाल, बच्चुकैलाश, तारादेवी र अरुणा लामाका गीत उनले ती गीतका गायक–गायिका नचिन्दैदेखि गुनगुनाउने गरेको सुनाउँछिन् । बाल्यकालमा गुनगुनाएका गीतमा सम्झना भएसम्म पुष्प नेपालीको ‘शीतल माथि नि शीतल भो नि, लौ–लौ बरको छायाँले’, तारादेवीको ‘जुन निदाउन तारा निदाउन’, नारायणगोपालको ‘तिम्रोजस्तो मुटु मेरो पनि, तिमीजस्तो माया मेरो पनि’ हुन् ।
झ्यालमा झुन्डिएको एउटा सानो रेडियोमा कति धेरै मान्छेले मिलेर गीत गाए होलान् भन्ने बालापनको सोचबाट गीत–संगीतप्रतिको धुनमा उनी लाग्न थालिन् । बुवा कर्णेल धनविक्रम र आमा भीमकुमारी राणाकी छोरी उनको जन्म पाल्पा तानसेनको सिल्खान टोलमा भएको हो । जन्मिएको एक वर्षमै पोखरा आएकी उनी पोखरा–१ मिरुवामा हुर्किन् । पोखराको माटोबाट संगीतको सुगन्ध चारैतिर छर्न सफल उनी कालजयी गीतका सर्जक हुन् । कर्णेल पितालाई भेट्न पोखराको विजयपुरको सैनिक क्याम्पमा जाँदा बुवाको कोठामा झ्यालमा झुन्ड्याएर राखिएको रेडियो खोलेर ‘लर्के जोवन गएन माया नलाई भएन, चौतारीमा मायालु नबसी भएन’ गीत गाउँदै नाचेको उनलाई अझै सम्झना आउँछ । उनको पहिलो रेकर्ड भएको गीत ‘डम डम डम्फु बजेको तालैमा’ हो ।
संवत् २०२८ मा रेडियो नेपालमा जाने अवसर मिलेसँगै उनको संगीत साधनाले गोरेटो पहिल्यायो । पछि त्यही गोरेटोले उनलाई नेपाली संगीत क्षेत्रको राजमार्गमै पुर्यायो । अहिले पनि संगीत साधनामै व्यस्त राणा, उमेरले सात दशक ढल्कँदा पनि उनको संगीतप्रतिको ऊर्जा र उत्साहमा कमी आएको छैन । ‘मेरो रगतको नसा–नसामा गीत–संगीत बगेको छ,’ हार्मोनियम बजाउँदै उनले भनिन्, ‘मलाई गीतका लयमा डुबुल्की मार्दा मानसिक रूपमा शान्तिको अनुभूति हुन्छ । म अझै गाउँछु ।’ जीवनका उत्तराद्धमा पनि अब गीत–संगीतमै जीवन गुजार्ने सोच छ ।
पोखरा महानगरपालिका–१ बागबजारनिवासी राणा वरिष्ठ गायक स्व. सरोजगोपाल बज्राचार्यकी पत्नी हुुन् । गायिका भएर नै आफ्नो जीवनसाथीका रूपमा गायक सरोजगोपाललाई रोज्नुभएको हो ? मेरो प्रश्नमा उनले हाँस्दै जवाफ दिइन्, ‘होइन । उहाँसँगको भेट एउटा संयोग थियो । कतिपय अवस्थामा सँगसँगै गीत गाउँथ्यौं । तर, उहाँको स्वरले भन्दा पनि स्वभावले मेरो मन जित्यो ।’ उनले जीवनका सुरुआती दिनलाई सम्झँदै थपिन्, ‘उहाँसँग कहिले र कसरी भेट भयो भन्ने नै थाहा पाइनँ । यसमा पोखराका ‘प्रोग्राम अर्गनाइजर’को भूमिका छ । मेरा बुवाले पनि कतिपय क्याम्पमा हुने सांगीतिक कार्यक्रममा बाबा सरोजलाई बोलाऊ भन्नुहुन्थ्यो । तत्कालीन समयमा हुने सांगीतिक कार्यक्रममा हामी सँगैसँगै हुन्थ्यौं ।’
सरोजगोपालले एकपटक हाइस्कुलमा शान्ति शाह, बच्चुकैलाशको ‘कल्पना गगन, मुस्कुराउने चन्द्रवदन, कहिले होला त्यो दिन जब होला मीठो मिलन’ भन्ने गीत गाएको भने राणाको मस्तिष्कमा ताजै छ । राणाले २५ वर्षको उमेरमा सरोजगोपालबाट प्रेम प्रस्ताव आएको र त्यससँगै प्रेमिल गोरेटोबाट संगीत क्षेत्रको यो जोडी बनेको अनुभव सुनाइन् । ‘उहाँले प्रेम प्रस्ताव राख्ने बेलासम्म मैले प्रेमकाबारे सोचेको रहेनछु,’ उनले भनिन्, ‘उहाँको प्रस्तावपछि बल्ल प्रेमको अनुुभूूति गरें ।’
विवाहका सन्दर्भमा उनले जानकारी गराइन्, ‘प्रेम प्रस्तावको एक÷दुई वर्षमै विवाह भयो । हाम्रो अन्तरजातीय विवाह थियो । विरोध त त्यति भएन । बुवाले फरक–फरक जातका तीनवटा श्रीमती बिहे गर्नुभएको थियो । तर, बुवाको आफूले रोजेको केटासँग विवाह गराउने चाहना रहेको पछि थाहा पाएँ ।’
बिहे गरेर भागेर जाँदा विजयपुर खोला तरेर पारि पुगेपछि रोकिएको पल अझै सम्झन्छिन् । सरोजगोपालको एउटा गीत पनि छ ‘देउराली उकाली चढेर, विजयपुर खोला तरेर’ । उनीहरू विजयपुर खोला तरेर नजिक एक होटलमा बसे । १५ दिनपछि फर्केर पोखरा आए । सरोजको साथी करोडौं मुटुको गीतका रचनाकार नवराज कार्कीले अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्दै हाम्रा लागि कोठा भाडामा लिएर एक महिना पुग्ने रासनसहित व्यवस्था गरिदिए ।
तत्कालीन समयमा राणा महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा सांस्कृतिक प्रबन्धकका रूपमा कार्यरत थिइन् भने सरोजगोपाल पुरुष प्रशिक्षण केन्द्र (नगर प्रशिक्षण केन्द्र) मा कार्यरत थिए । दुवैले २१ वर्षको जागिरे जीवन उपदान लिएर छाडे । सरोजगोपालले पछि नेपाल टीभी र रेडियो नेपालमा पनि पाँच वर्ष काम गरे ।
पतिलाई सम्झँदै राणाले सुनाइन्, ‘धेरै खुसी साट्न बाँकी नै थियो । सांगीतिक सहयात्रामा सँगसँगै निकै दूरको यात्रा पार गरौंला भन्ने थियो । मलाई छाडेर एक्लै जानुभयो । बाँकी दिनहरू संगीत साधनामा रमेर उहाँकै यादमा बिताउँछु ।’
बाबा राणाले सरोजगोपालको निधनपछि उनको सम्झनामा ‘सपना मेरो अधुरै भयो, खोज्दा खोज्दै हराएँ म’ भन्ने आधुनिक गीत रेकर्ड गराइसकेकी छन् । सरोजगोपालका ८० भन्दा बढी गीत रेडियो नेपालमा रेकर्ड छन् । तर, उनको जीवनकालमा गीतिएल्बम भने निकाल्न पाएनन् । सरोजगोपालको गीत रेकर्डको एक प्रसंगमा उनले भनिन्, ‘२०७१ सालतिर हो ‘लुम्लेको कविता गाउँ’ भन्ने एक कार्यक्रममा विम्ब कवि रमेश श्रेष्ठसँग ‘अब उकाली पनि उक्लन्छु, देउराली पनि झर्छु, नक्कली भगाइलान्छु भन्ने रेकर्ड गर्छु’ भन्नुभएको थियो । तर, दुर्भाग्य त्यसको एक महिनामा उहाँको निधन भयो ।’
सरोजगोपालको ६४ वर्षको उमेरमा २०७१ साउन २९ गते निधन भएको हो । नेपाली लोकगायनको क्षेत्रका प्रतिभाशाली गायक तथा संगीतकार बज्राचार्यसँग परम्परागत लोकसंगीत र ठेट गीतलाई आधुनिकतासँग जोड्न सक्ने कला पाइन्थ्यो ।
संवत् २०६४ जेठ ४ गते संगीत प्रशिक्षण केन्द्र पोखराको आयोजनामा ‘सरोजगोपाल र बाबा राण युगल साँझ’ आयोजना गरिएको थियो । जसमा सरोज र बाबाले दुई दर्जनभन्दा बढी गीत गाउनुभएको थियो । राणाका ‘साइको घर कहाँ हो कहाँ,’ ‘बिर्सिजाने निष्ठुरी’, ‘हे आमा जन्मायौ किन’, ‘करौडौँ मुटुहरूको’ बहुचर्चित गीत छन् भने उनले लोक, आधुनिक, राष्ट्रिय गीत, भजन आदि गरेर दुई सयभन्दा बढी गीत रेकर्ड गराइसकेकी छन् । उनका ‘भिजेको परेली’ एल्बम र ‘सांस्कतिक ज्ञान’ तथा ‘गाउँदा गाउँदै यहाँसम्म’ प्रकाशित कृति हुन् ।
राणाको संगीतप्रतिको रुचि देखेर तत्कालीन रानी ऐश्वर्या राज्यलक्ष्मी शाहले बरोडामा सांगीतिक अध्ययनका लागि वृत्तिसमेत प्रदान गरेकी थिइन् । तर, दुई वर्षकी छोरी भएकाले बाबा राणाले त्यो अवसर गुमाइन् । राणाले रेडियो नेपालबाट आयोजित राष्ट्रव्यापी आधुनिक गीत प्रतियोगितामा नवोदित गायिकातर्फ २०२९ मा प्रथम भई स्वर्ण पदक प्राप्त गरेकी थिइन् । तत्कालीन समय रानी ऐश्वर्या र राजा वीरेन्द्रबाट नगद पुरस्कार पनि प्राप्त गरिन् ।
नेपाली गीत–संगीतको उन्नयनका लागि योगदान पुर्याएबापत उनलाई दर्जन बढी संघ संस्थाबाट सम्मान एवम् पुरस्कार प्राप्त भएको छ ।
राणाका एक छोरा र एक छोरी छन् । उनी आफ्नै निवास पोखरा–१ बगरमा छोराबुहारी र नातिनातिनी साथमा संगीत साधनामै लागिरहेकी छन् । हार्मोनियम बजाउँदै सरोजगोपालका तस्बिर र सम्मानले भरिएको कोठामा उनले दैनिक श्रीमान्लाई सम्झँदै सांगीतिक शब्दबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आएकी छन् ।
‘मेरो नाम ?’ उनले गर्वसाथ सुनाइन्, ‘जापानी ज्यापुनी ।’ नेपाली साथीहरूले माया गरेर उनलाई ‘जापानी